Umfundi owakhubazeka ubopha uthisha | isiZulu
Umfundi owakhubazeka ubopha uthisha
'Bazoxoshwa othisha abashayayo'
Ababophe uMnyango othisha - Sadtu
Uvulelwe icala uMnyango wezeMfundo
Johannesburg - Ibhungu elineminyaka engu-22 ubudala, lifake enkantolo uMnyango wezeMfundo eLimpopo, lifuna isinxephezelo sika-R4 million kulandela ukuthi likhubazeke ngemuva kokushaywa nguthisha, kubika iSowetan.
USelly Oupa Mokonyama, okumanje uhamba ngezinduku, uhambise amaphepha eNKantolo eNkulu ePitoli, amaphepha athi washaywa ngenduku yomshanelo, eshaywa nguthisha esikoleni samabanga aphansi iMolemo Primary School.
Isehlakalo senzeka ngesikhathi uMokonyama eneminyaka eyisishiyagalombili ubudala.
"Angikaze ngishaywe kabuhlungu kanjeya. Ngawa ngangabe ngisakwazi ukuvuka," esho etshela iphephandaba.
"Ngakhala kwaze kwafika othisha abanye bangisiza, sengingene ngiphuma ezibhedlela. Angilutholi usizo."